Nwanyi ọ bụla na-arọ nrọ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ruo mgbe ebighị ebi, mgbe ahụ ruo ogologo oge iji wepụ ntutu isi na-achọghị. Otu n'ime ụzọ kachasị dị irè na nke na-enweghị mgbu maka ịme ihe mgbaru ọsọ a bụ IPL photoepilation. Usoro dị iche iche na-eme ka ị nwee ike wepuchaa ntutu isi ojii kpamkpam, na ịkwado nkuzi na-eme ka akpụkpọ ahụ dị ọcha.
Kedu ihe ga-ewepụ IPL?
Ejiri usoro ngwongwo nke a na-atụle anya dịka Pulse Light. Ihe kachasị mkpa nke usoro ahụ bụ eziokwu ahụ na ọkụ ọkụ ọkụ pulsed na-emetụta mkpụrụ akụkụ ahụ na ntụgharị dị iche iche site na 500 ruo 1200 nm. Ike dị otú ahụ bụ ihe anụ ahụ na-etinye nke ọma na melanin, dịka ọmụmaatụ, ntutu isi. N'ihi ihe ahụ, thermolysis na-eme - kpoo mkpụrụ ndụ ahụ ruo na okpomọkụ nke na-ebibi ha.
Dịka, mgbe ị na-eji usoro IPL, ọkpụkpụ ntutu isi adịghị anwụ anwụ, ma ọ bụrụ na o mebiri ma ọ bụ na-eme ka ọkpụkpụ, ma ọ bụ iji mebie usoro okirikiri ahụ, ịgba ụcha na ọkpụrụkpụ nke ntutu isi na-ebelata.
O bu ihe kwesiri iburu n'uche na abughi IPL bu akaraahia nke Lumenis Ltd. Ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-ewetakwa ngwaọrụ mkparịta ụka nke netwọk, ma ndị ọzọ na-akọwapụta teknụzụ ndị ọzọ (AFT, iPulse SIPL, EDF, HLE, M-Light, SPTF, FPL, CPL, VPL, SPL, SPFT, PTF, E-Light). Ụdị nke ngwaọrụ ndị a dị obere, na-emekarị ka ha nwere oke nrịba dị iche iche dị iche iche.
Kedu ka usoro iwepụ ntutu IPL si arụ ọrụ?
Usoro a kọwara chọrọ nlezianya njikere:
Dee ego na ihe nchekwa anyanwụ ma ghara ịma banyere 2-3 izu tupu oge.
Zere ihe ọkpụkpụ na ihe ọ bụla ọzọ mebiri emebi nke ahụ.
Ejila epilator na wax. Naanị ịcha ntutu na -ekwe.
Jide n'aka na ntutu na ụbọchị usoro ahụ bụ 1-2 mm ogologo.
Oge a n'onwe ya na-esote nkebi ndị a:
Nchọpụta nke ọkwa ike dị na phototype akpụkpọ anụ, agba nke ntutu isi na ntụgharị nke ntachu.
Nlekọta anesthetic gel na-eme ihe dị mma 60 nkeji tupu usoro ahụ.
Ozugbo tupu ihe ahụ emee, itinye gel nke na-eme ka nrụrụ ahụ dịkwuo mma ma belata mgbasa nke ọkụ.
Nrụgide dị ukwuu nke na-arụ ọrụ na ngwaọrụ ahụ na akpụkpọ, mgbe ọkụ, ngwa na-aga n'ógbè dị nso.
Mgbe nnọkọ - itinye ihe mgbochi, nsụhọ na moisturizing ude na D-panthenol .
N'oge nhazi, ọ dị mkpa ka ọkachamara ahụ na onye ahịa jiri iko ndị chebe retina site na redio netwọk.
Mgbe IPL photoepilation, ị ga-agbaso iwu:
Jiri Panthenol ude iji gbochie ncha na akpụkpọ ahụ.
Elela na sauna, saa na ọdọ mmiri, ma kwụsị usoro mmiri maka ụbọchị 3.
N'ime otu izu mgbe nnọkọ ahụ, kwụsịrị iji ihe ịchọ mma na ịdị ọcha na-agwọ ọrịa.
Ejila sunbathe, jiri sunscreen nwere ihe dịkarịa ala 30 nkeji.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, wepụ ntutu isi ndị ọzọ anaghị eji wax, epilator, naanị agụba.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na a ghaghị imeghachi IPL ntutu isi kwa izu 3-6 ruo mgbe a na-eme usoro 5 ruo 10. Na emesia i kwesiri ileta ulo mkpochapu ihe kariri. Usoro a akọwapụtara agaghị egbochi ntutu na-achọghị ya ruo mgbe ebighi ebi, ebe ọ bụ na ìhè na-emetụta nanị ọrụ, ma ọ bụghị "ụra" ụra.
Nchikota IPL na RF wepu ya - gini bu nka?
A maara usoro mgbagwoju anya nke ngwaike ngwanrọ, nke, na mgbakwunye na ọkụ ọkụ blọọtị pulsed, na-emepụta RF (Radio Frequency). Uru nke usoro a bụ ọnụego mbibi nke mkpụrụ ndụ (ihe a na-ahụ anya bụ mgbe ọ gachara 1-2 sessions), yana ike iji wepụ ntutu isi.
A na-eji aka ha eme ihe na-acha isi awọ
Ekebe isi nke nwanyi na ulo arusi di iche iche
Nkpu maka isi na koko
Ihe ndi di egwu nke nwanyi
Ntutu isi maka ezi ntutu
A na-agbazi ntutu - gịnị ka m kwesịrị ime?
Mmiri mmanụ na-edozi maka ntutu isi - 6 Ezi ntụziaka na ihe nzuzo nile nke ngwa
Achịcha anụ na-acha uhie uhie
Atụmatụ Nlekọta Ntutu
N'ibu isi - gini ka ime?
Ịdị ọcha maka ntutu isi
Kedu esi tufuo ntutu isi gị?
Uwe na uwe
Esi esi esi nri ọkụkọ?
Mmiri nchedo anyanwụ
Lemonella - lekọta
Fred Perry akpa
Kedu seedlings a kụrụ na Jenụwarị-February?
Kedu otu esi eji akwa akwa ulo mmadu?
Achịcha Na-agba Mkpụrụ
Ed Shiran na James Blunt kwuru na ha ga-ejikọ aka
Endometritis na afọ ime
Brown akpụkpọ anụ
Nicole Kidman na di ya ekweghị na echiche nke ịwa ahụ plastic
Omume nke mmadu site n'ile anya ihu
Ememe Ezumike 2013
Esi ewepu udide ududo?
Kedu otu esi azụlite nwatakịrị n'ime ọnwa 1?
Mkpụrụ dị iche iche na-ekwenye ekwenye maka greenhouses
Na-alụ ọgụ aphids n'ogige
Esi esi kee eriri n'úkwù?
Omission nke akpanwa - ọrụ
Teratozoospermia - ọgwụgwọ
Kedu ihe ị chọrọ maka aquarium ụlọ?
Comedones - ọgwụgwọ